MEE KA WINDOWS 8: SETUP OS - WINDOWS - 2019
Mee ka Windows 8: Setup OS
Imirikiti ndị ọrụ nke Windows OS adịghị enwe afọ ojuju maka ọsọ nke ọrụ ya, karịsịa mgbe oge ụfọdụ gasịrị mgbe ọ nwụsịrị na disk ahụ. Ya mere, ọ bụ m: Osisi ọhụrụ nke Windows 8 rụrụ ọrụ ngwa ngwa maka ọnwa mbụ, ma mgbe ahụ ihe mgbaàmà a maara nke ọma - folda anaghị emeghe ngwa ngwa, kọmputa na-agbanye ruo ogologo oge, frekes na-apụtakarị, na-acha anụnụ anụnụ ...
N'isiokwu a (isiokwu ahụ ga-esi n'akụkụ 2 (2-akụkụ) anyị ga-emetụ na mmalite nke Windows 8, na nke abụọ - anyị ga-ebuli ya maka ọganihu kachasị elu site n'iji ngwanrọ dị iche iche.
Ya mere, otu otu ...
1) Ịkwụsị ọrụ "enweghị isi."
2) Wepụ mmemme site na akpaaka
3) Ịtọlite ​​os: isiokwu, Aero, wdg.
Na ndabara, mgbe ị wụnye Windows, ọrụ na-agba ọsọ, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-adịghị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, gịnị mere onye njikwa obibi akwụkwọ ji achọ onye ọrụ ọ bụrụ na ọ nweghị onye nbipute? E nwere ezigbo ihe atụ dị otú ahụ. Ya mere, gbalịa iwepu ọrụ ndị kachasị mkpa. (Dị ka o kwesịrị ịdị, ị chọrọ nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ - ị kpebiri, ya bụ, njikarịcha nke Windows 8 ga-abụ maka onye ọrụ ọ bụla).
Ntị! A naghị atụ aro ka ị kwụsị ọrụ ọ bụla na n'enweghị ihe ọ bụla! N'ikpeazụ, ọ bụrụ na i meghị ihe a na mbụ, ana m akwado ịmepe Windows site na nzọụkwụ ọzọ (ma laghachi na nke a mgbe emechara ihe ọzọ). Ọtụtụ ndị ọrụ, n'amaghị ama, gbanyụọ ọrụ na usoro, na-eduga na Windows ...
Maka mmalite, ị ga-aga ọrụ ahụ. Iji mee nke a: mepee osụchi os os wee pịnye na ọchụchọ maka "ọrụ". Ọzọ, họrọ "lelee ọrụ mpaghara". Lee fig. 1.
Fig. 1. Ọrụ - Ogwe njikwa
Ugbu a, Kedu esi gbanyụọ nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ?
1. Họrọ ọrụ site na listi ma pịa bọtịnụ aka ekpe (pịa fig 2).
Fig. 2. Gbanyụọ ọrụ
2. Na windo nke pụtara: nke mbụ pịa bọtịnụ "ịkwụsị" wee họrọ ụdị mwepụta (ọ bụrụ na ọrụ adịghị mkpa ma ọlị, họrọ "ịmalite" site na listi).
Fig. 3. Ụdị mmalite: nkwarụ (ọrụ kwụsịrị).
Ndepụta nke ọrụ ndị nwere ike ịnwe nkwarụ * (n'usoro mkpụrụ edemede):
1) Search Windows (Ọrụ ọchụchọ).
Ezigbo ọrụ "voracious service", na-edepụta ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ịnweghị iji ọchụchọ ahụ, ọ na-atụ aro iji gbanyụọ ya.
2) faịlụ efu
Ọrụ ntanetị a na-arụghị ọrụ na-arụ ọrụ nchịkọta na cache nke faịlụ efu, na-azaghachi na logon na logoff, ọrụ ngwa ngwa API, ma na-eziga ihe ndị na-amasị ha nye ndị nwere mmasị na ọrụ nke faịlụ offline na mgbanwe nchịkwa ọnọdụ.
3) Ọrụ inyeaka IP
Na-enye njikọta ntanetị na teknụzụ ọgbara ọhụrụ maka mbipute IP 6 (6to4, ISATAP, ọdụ proxy na Teredo), yana IP-HTTPS. Ọ bụrụ na ị kwụsị ọrụ a, kọmputa ahụ agaghị enwe ike iji njikọ ọzọ na-enye ndị teknụzụ ndị a.
4) nbanye nke abụọ
Na-enye gị ohere igbanye usoro maka onye ọrụ ọzọ. Ọ bụrụ na a kwụsị ọrụ a, ụdị ndebanye aha njirimara adịghị. Ọ bụrụ na ọrụ a kwụsịrị, ị pụghị ịmalite ọrụ ndị ọzọ na-adabere na ya.
5) Bipụta Bipute (Ọ bụrụ na ịnweghị onye nbipute)
Ọrụ a na-enye gị ohere itinye ọrụ ntanetị na ọdụ ụgbọelu na-enye mmekọrịta na onye nbipute. Ọ bụrụ na ị gbanyụọ ya, ị gaghị enwe ike ibipụta ma hụ ndị nbipute gị.
6) Nyocha Ndị ahịa gbanwere njikọ
Ọ na-akwado njikọ nke NTFS-faịlụ eburu n'ime kọmputa ma ọ bụ n'etiti kọmputa na netwọk.
7) NetBIOS n'elu TCP / IP module
Na-enye NetBIOS nkwado site na ọrụ TCP / IP (NetBT) na NetBIOS aha mkpebi maka ndị ahịa na netwọk, na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta faịlụ, ndị nbipute, na jikọọ na netwọk. Ọ bụrụ na a kwụsịrị ọrụ a, ọrụ ndị a nwere ike ọ gaghị adị. Ọ bụrụ na ọrụ a nwere nkwarụ, ọrụ niile na-adabere na ya enweghị ike ịmalite.
Na-enye nkwado maka ịkekọrịta faịlụ, ndị na-ebi akwụkwọ, na aha ndị ọkpọ maka kọmputa nyere site na njikọ netwọk. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ kwụsịrị, enweghị ike ịrụ ọrụ ndị ahụ. Ọ bụrụ na enyereghị ọrụ a, ọ gaghị ekwe omume ịmalite ọrụ ọ bụla doro anya.
9) Oge Windows Service
Na-ejikwa mmekọrịta ụbọchị na oge na-agafe niile ahịa na sava na netwọk. Ọ bụrụ na a kwụsịrị ọrụ a, njikwa oge na oge ga-adị. Ọ bụrụ na ọrụ a kwụsịrị, ọrụ ọ bụla nke dabere na ya enweghị ike ịmalite.
10) Ọrụ Windows Download Download (WIA)
Na-enye ọrụ ntanetị site na scanners na kamera dijitalụ.
11) Ọrụ Enumerator Ngwaọrụ
Tinye usoro iwu maka ihe nchekwa nchekwa. Na-enye ohere maka ngwa, dị ka Windows Media Player na ọkachamara mbubata foto ahụ, iji nyefee na mekọrịta ọdịnaya mgbe iji ngwaọrụ nchekwa echefu.
12) Ọrụ Mgbasaozi Nyocha
Usoro nyocha gbasara nchọpụta na-enye gị ohere ịchọpụta nsogbu, nsogbu nsogbu na idozi nsogbu ndị metụtara ọrụ Windows. Ọ bụrụ na ị kwụsị ọrụ a, nchọpụta ahụ agaghị arụ ọrụ.
13) Nnyekorita Ntughari aka
Na-enye nkwado maka nnyemaaka na-akwado ihe omume. Ọ na-enyocha mmemme ndị arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma na-agba ọsọ, ma chọpụta nsogbu metụtara nkwenye. Ọ bụrụ na ị kwụsị ọrụ a, Onye Nlekọta Ọrụ Mmemme agaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
14) Ọrụ Mgbasa Ozi Windows
Na-enye ohere izipu ozi nchịkọta akụkọ na ihe omume nke mmechi ma ọ bụ na-emetụkwa, ma kwekwa ka nnyefe nke ngwọta dị ugbu a na nsogbu. Na-enyekwa ohere maka ịmepụta ederede maka ọrụ nyocha ọrịa na mgbake. Ọ bụrụ na a kwụsịrị ọrụ a, ozi nchịkọta nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ma enweghi ike gosipụta rịzọlt nke nchọpụta nsogbu na mgbake.
15) Ndenye ederede
Na-enye ndị ọrụ ntanetị ohere ịgbanwe ụkpụrụ ntọala na kọmputa a. Ọ bụrụ na a kwụsị ọrụ a, ọ bụ naanị ndị ọrụ mpaghara na-agba ọsọ na kọmputa a. Ọ bụrụ na ọrụ a kwụsịrị, ọrụ ọ bụla nke dabere na ya enweghị ike ịmalite.
16) Ụlọ Nche
WSCSVC (Ụlọ Nche Windows) na-edekọ ma dekọọ ogige nche. Ntọala ndị a gụnyere ọnọdụ nchekwa (enyere ma ọ bụ nkwarụ), software antivirus (nyeere / nkwarụ / ochie), software antispyware (nyeere / nkwarụ / ochie), mmelite Windows (akụrụngwa ma ọ bụ nchịkwa ngwa ngwa na ntinye nke mmelite), njikwa akaụntụ njirimara (nyeere) ma ọ bụ nkwarụ) na ntọala Ịntanetị (akwadoro ma ọ bụ dị iche na nke akwadoro).
Ihe dị mkpa nke "brakes" nke Windows 8 (na n'ezie ọ bụla os) nwere ike ibudata ihe omume: i.e. mmemme ndị a na-arụ ọrụ na-akpaghị aka (ma na-agba ọsọ) tinyere os n'onwe ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị, na-ebido ụyọkọ mmemme n'oge ọ bụla: ndị ahịa ahịa, usoro mmemme, ndị editọ vidio, ihe nchọgharị, wdg. Na, na-adọrọ mmasị, pasent 90 nke setịpụrụ zuru ezu ga-eji site na nnukwu na nnukwu ikpe. Ajụjụ bụ, gịnị kpatara ha niile ji eji oge ọ bụla ị na-agbanye PC?
Site n'ụzọ, mgbe ị na-achọpụta na ị na-ebugharị, ị nwere ike ịmalite mmalite ngwa ngwa nke PC, yana ịkwalite ọrụ ya.
Ụzọ kachasị mfe iji meghee mmemme mmalite na Windows 8 - pịa igodo nchikota "Cntrl + Shift Esc" (ya bụ, site n'aka onye njikwa ọrụ).
Mgbe ahụ, na windo na-egosi, dị nnọọ họrọ taabụ "Mmalite."
Fig. 4. Njikwa Task.
Iji gbanyụọ ihe omume ahụ, nanị họrọ ya na listi ma pịa bọtịnụ "gbanyụọ" (n'okpuru, n'aka nri).
Ya mere, iwepụ mmemme niile ị na-ejikarị eme ihe nwere ike ime ka ngwa ngwa nke kọmputa gị dịkwuo mfe: ngwa agaghị ebunye RAM gị ma kwụnye ihe nhazi na ọrụ na-abaghị uru ...
(Site n'ụzọ, ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ ọbụna ngwa niile site na ndetu - os ga-ebuba ma ga-arụ ọrụ na ọnọdụ nkịtị.
Mụtakwuo maka ibudata na Windows 8.
Ọ bụghị ihe nzuzo ọ bụla na, ma e jiri ya tụnyere Winows XP, Windows 7, 8 Oss dị ọhụrụ na-achọ ihe onwunwe, nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi "nhazi" ọhụrụ, ụdị mmetụta dị iche iche, Aero, wdg. mkpa. Ọzọkwa, site na ịgbanwu ya, ị nwere ike imeziwanye (ọ bụ na ọ bụghị site n'ọtụtụ).
Ụzọ kachasị mfe iji gbanyụọ "aghụghọ" ọhụrụ bụ ịwụnye isiokwu kpochapụla. E nwere ọtụtụ narị isiokwu dị otú ahụ na Ịntanetị, gụnyere ndị maka Windows 8.
Esi gbanwee isiokwu, ndabere, akara ngosi, wdg.
Esi gbanyụọ Aero (ọ bụrụ na ịchọghị ịgbanwe isiokwu).
Na-aga n'ihu ...